ज्यो.कमल पौडेलको भबिष्यबाणी पूरा,३ दिनमै पर्वत बिहादीको पैसा फेला – MeroJilla.com
ज्यो.कमल पौडेलको भबिष्यबाणी पूरा,३ दिनमै पर्वत बिहादीको पैसा फेला
गत शुक्रवारमा मात्रै हराएको विहादी गाउँपालिकाको २३ लाख रुपयाँ ज्योतिषी कमल पौडेलले भनेकै समयमा बैंकमा जम्मा भएको छ ।
पैसा हराएको भन्दै बिहादी गाउँपालिकाका लेखापाल गोविन्द्र भट्टराईले ज्यो.कमल पौडेललाई फोन सम्पर्क गरेका थिए । ज्यो.कमल पौडेलले भबिष्यबाणी गर्दै ३ दिन भित्र पैसा पाईने बताएका थिए । नभन्दै,समाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम २३ लाख बैंकमा जम्मा भयो ।
मैले पछि मात्रै समाजिक सुरक्षा भत्ता भन्ने थाह पाएँ ज्यो.पौडेलले भने,‘त्यो पैसा ६ जना मध्य कसले लगेको भन्ने पनि म भन्न सुक्छु । हराएको पैसा ३ दिनमा जम्मा कसरी हुन्छ ज्यो.पौडेलले भने ।
प्रहरी श्रोतका अनुसार पैसा हारएको जानकारी पाउँदा साथ खोजतलास भयो । प्रहरी भन्छ सवै सचिवले गाडीमा यात्रा गर्दा अनौठो आवज आयो अनि झोला ह¥यौं । यो सरसर कृत्रिम हो आवज आउँदा पैसाको झोला किन हेरियो ? किन एउटा मात्र झोला हरायो ? भन्ने गम्भिर प्रश्न हो प्रहरीले अनूसन्धान गर्दैछ ।
उता बिहादी गाउँपालिकाका लेखापाल गोविन्द्र भट्टराईलाई किन पैसा ३ दिनमै बैंकमा दाखिला भयो भनि सोद्धा उनले भने,‘सवै सचिवहरुले पेशकी लानुभएकाले जम्मा भयो । ज्यो.कमल पौडेलले भन्छन् त्यो पैसा हराएकोमा ६ मध्य कसले लगेको हो म भन्न सक्छु ।